C/risaaq Cumar Maxamed Wasiirka Amniga Somaliya oo gaaray Baledweyne(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Wafdi uu horkacaayo Wasiirka Wasaaradda Amniga Somaliya, C/risaaq Cumar Maxamed, ayaa galabta gaaray Magaalada Baledweyne Ee Xarunta Gobolka Hiiraan, ka dib markii ay ka amba baxeen Magaalada Muqdisho.
Wafdiga Wasiirka, ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay Garoonka Ugaas Khaliif Ugaas Rooble, halkaasoo daqiiqado ka dib ay ka galbiyeen Ciidamada Dowladda iyo Amisom.
Wafdiga Wasiirka oo Xildhibaano u badnaa, ayaa waxay gaareen hoyga uu Magaalada Baledweyne ka degan yahay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble, halkaasoo ay wada hadalo kula leeyihiin Odayaasha Dhaqanka.
Wasiirka oo Saxaafadda la hadlay, ayaa ujeedada ay u yimaadeen Magaalada Baledweyne waxaa uu ku sheegay, sidii dadka deegaanka ay ugala hadli lahaayeen cabasho buu yiri ay qabaan.
Wasiirka, ayaa sheegay in casuumaad uu ka helay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif, si ay kaga wada hadlaan waxyaabaha ay dadka reer Hiiraan ka tirsanayaan dhinaca Dowladda Federaalka Somaliya. Wasiirka waxaa uu cadeeyay in maalmahaan uu ku nagaan doono Baledweyne.
Dhanka kale Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya Ee Gobolka Hiiraan ka soo jeedo, ayaa sheegay in dadka reer Hiiraan ay ka tashanayaan aayahooda.
Qaar ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee Gobolka Hiiraan oo laba toddobaad ka hor isaga baxay Shirka Maamul U Samaynta Gobolada Shabellaha Dhexe & Hiiraan, ayaa waxay taasi dhalisay in hakad uu ku yimaado shirkii ka soconaayay Magaalada Muqdisho.